अकला मन्दिरमा राति शंखघण्ट आफै बज्नु, दिनमा भक्तजनहरु दर्शन गर्न आउँदा घण्ट आफै हल्लिनु ! दैविक शक्ति (भिडियो सहित) – Etajakhabar
सो महायज्ञ संचालन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी संघीय संसदका माननीय सांसद श्री केदार सिग्देल हुनुहुन्थ्यो। सो कार्यक्रम सफल पार्न म्याग्दे गाउँपालिका तथा अन्य क्षेत्रका समेत समाजसेवी, बुद्धिजिवी, महिला, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, किसान, मजदुर, राजनैतिक दल, पेशाकर्मी, संघसंस्था सबै तह र तप्काका व्यक्ति सहभागी भई आर्थिक सहयोगका पु¥याउनु भएको थियो । अकलादेवी मन्दिरको गुरुयोजना बनाउनको लागी ललितपुर गोदावरी नगरपालीका वडा नं. १३ निवासी विनोद खड्कालाई आम भेलाले जिम्मा दिने निर्णय गरीएको थियो । भिडियो हेर्नुहोस : ﻿
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख १९, २०७६ समय: १७:३९:१६